Waaheen Media Group » HUNGURI WADKII MA ARKO
Browse:Home Articles HUNGURI WADKII MA ARKO	HUNGURI WADKII MA ARKO
Comments Off on HUNGURI WADKII MA ARKO	Siyaad bare wuu diiday inuu bacaadkii shalan bood lacag loogu bedelo wuxuuna u arkaayay markaa uu diidaayay inay tahay khiyaano qaran . Ragii ka danbeeyay saw barrigii iyo badiiba ma iibin .
Bal is waydii halka loo socdo , ma sidaasay dani inoogu jirtaa hadaan soomaali nahay ?
Malaha waxaan moodaynaa inuu horu marku yahay in ilmaheenu adoomo u noqdaan gumaysi madaw iyo gaal aan kuu arxamayn .
Fadhigaa fadhi ha looga noqdo hana la xisaabtamo .
Waxaanan u malaynayaa kolka inay dhamaatay wakhtigii uu talinaayay jaahil ku tababartay qabyaalad iyo kala qoqob . Waxaana la gaadhay xiligii dhalinyarada aqoonta leh lana tartami doonaan hiigsana doonaan wadamada horuu maray . Alloow kolka daalaye kuwaa aan u garba duubanahay naga xoree .